Ogige ndị agha Målilla | Nleta Hultsfred
hem » 🥾 Hụ & mee » 👟 Ihe omume » ⛸️ Ihe omume oyi » Ålọ ikpe Målilla
Ịkwọ ụgbọ mmiri bụ ihe omume oyi na-ewu ewu! N'ebe a, ị nwere ike ịgbaziri skate, okpu agha, bọọlụ na klọb. Enwere ebe BBQ maka ndị na-achọ ighe, echefula iweta nkụ nke gị na nkata kọfị. N'ebe a, ị nwekwara ike ịga ski na sledding nke obodo
Ọ bụ ụlọ ikpe ịgbajiri agbaji
A na-enwu n'ụlọ ikpe ahụ ma enwere ụlọ na-agbanwe agbanwe
Ọdụdọ nke na-anọdụ 900 mmadụ
Oge mmeghe nwere ike ịdịgasị iche dabere na ihu igwe
Ogwe 8, 570 82 Milili, Sverige
4.1 si 5.0
Nyocha 48 na Google
Obi dị anyị ezigbo ụtọ. Onye na-emesapụ aka nke Målilla Bandy na-agbazinye m skates na okpu agha m na-enweghị nke ha! Nnukwu rink nke na-enye ohere ọkara iri na abụọ dị iche iche na-eme n'otu oge, yana ịgba ịnyịnya n'efu. Ọmarịcha ikpo snow maka ụmụaka mgbe ike gwụrụ ha nke ịkwọ ụgbọ mmiri. A mara mma ụbọchị na mma ndị mmadụ ma na na ice!
Ndewo nnukwu otuto nye onye ọ bụla gbara mbọ hụ na egwu ahụ nwere ike ịbụ otu n’ime egwu ghere oghe ka ụmụaka ahụ wee nwee ike I mee nke ukwuu 😇😃😁🤑
Facilitylọ ọrụ echekwara nke ọma, ọ dị mma na ịnwere ike ịgbazite skates, okpu agha na klọb. Ohere imi ma weta kọfị gị. Nso ụlọ mposi.
Ọtụtụ awa nọrọ ebe ahụ na-eto eto.
Na-ekpo ọkụ 6 degrees ọkụ